Isku day Cunnooyin ku saabsan Taayirrada - Midkan' waa innaga! - Cuntooyinka giraangiraha
Cunno ku siiso Wheels isku day - kani annaga ayuu na saaran yahay!
Miyaad ka faa'iideysan lahayd keenista cunnooyinka nafaqada leh iyo kuwa macaan si toos ah albaabkaaga? Hadda waa waqtigii ugu habboonaa ee la siin lahaa Cunnooyinka Wheels iskuday!
Waqtiga xaddidan waxaan bixinaynaa fursad aan ku tijaabino Cunto ku saabsan Cuntada Wheels bilaash. Si aad xaq ugu yeelatid, fadlan buuxi foomka hoose waxaanuna cunto u geyn doonaa gurigaaga Khamiista, Nofeembar 9!
Fadlan ogow: Si aad uga qayb gasho dalabkan, waa inaad guriga joogtaa inta u dhexeysa 11ka subaxnimo ilaa 1 galabnimo ee Khamiista, Nofeembar 9. Cunnooyinka Lugaha la dhigto waxaa loogu adeegaa waayeelka iyo dadka naafada ah iyadoo diiradda la saarayo caawinta macaamiisheenna si madax bannaan. Bixinta waxaa laga heli karaa illaa 10/27/17 meelaha la geeyo ee la soo xulay inta ay alaabtu socoto. Xayiraadaha qaarkood ayaa lagu dabaqi karaa.
Fadlan buuxi foomka soo socda si aad isugu daydo Cunnooyinka Lugaha!
Muxuu yahay nambarkaaga zip?*
Dhiirrigelintaani waxay khuseysaa oo keliya xulashada aagagga alaabta la keenayo. Haddii aadan ku noolayn mid ka mid ah nambarkan lambarrada, laakiin aad xiiseyneyso inaad cunto si joogto ah u hesho, fadlan booqo cuntada-on-wheels.com.
Sababta codsashada cuntada (sax dhammaan inta ku habboon)*
Waxaan ahay 55 jir ama ka weyn
Waxaan ka soo kabanayaa dhaawac ama jirro
Waxaan qabaa naafonimo igu adag tahay inaan diyaariyo cunnooyin caafimaad qaba naftayda
Haddii midkoodna aanu adiga ku khusayn, laakiin aad u baahan tahay cunto caafimaad leh, fadlan ka wac Khadka Caawimaadda Cuntada ee Minnesota 1-888-711-1151.
Miyaad joogi doontaa guriga inta u dhexeysa 11 am-1 pm Khamiista, Nov. 9, si aad u hesho gaarsiinta cuntadan mahadnaqa ah?*
Haa, waan joogi doonaa halkaas!
Maya, ma awoodi doono inaan ka faa'iideysto dalacsiintan.
Cinwaanka Jidka Guri # Magaalada
Fadlan qor wax kasta oo xasaasiyad cunto ah ama xaddidaadyo cunto ah oo laga yaabo inaad leedahay:
FIIRO GAAR AH: Cuntada bilaashka ah waa soodhiyam-yar, macaan u roon oo wadnaha-caafimaad qaba. Adeegyadeena cuntada ee caadiga ah waxay qaadi kartaa kosher, kelyaha, laaktooska-free, gluten-free, vegan iyo cuntooyinka khudradda, laakiin dalabkan cunnada isku midka ah ma qaadi karo cuntooyinkaas.